Maamulaha iyo xiisaha go'an heerka wareegi nidaamka
トップページ ＞ 言語 ＞ ソマリ語 ＞ Maamulaha iyo xiisaha go'an heerka wareegi nidaamka
Wada jir ah ula wareegi nidaam go'an heerka maamulaha, waa qorshe bixinta ah in maamulaha iyo xiisaha go'an heerka wareegi nidaamka ah in loo isticmaalo ee ugu dhaqaalaha macaamilka.
waa isticmaalka a multi-badan tahay ee u muuqda mudnaan, laakiin Haddii aadan si adag u xusuusan feature sida, waa in aad ogaataa in mararka qaarkood ka dib ay helaan dib u dhac weyn. Sidoo kale waa wakhti ay fududahay in la jeexjeexay
, aynu isku dayaan in ay si adag u istaagaan on qorshaha ilaa bixinta.
la xiriira / maamulaha go'an heerka wareegi la xiriira
/ maamulaha slide dheelitirka iyo nidaamka bixinta xiiso toos ah-line
waayo, maamulaha iyo xiisaha go'an heerka wareegi
iyo nidaamka wareegi xiiso go'an heerka, amaahatay waayo, xaddiga lacagta, waa hab lagu abaalmarin lacagta helay tarmo boqolkiiba gaar ah.
inta badan maaliyadda macaamiisha, hab in kiisas badan oo lagu isticmaalo sida amaahaha card, waayo bixinta ee formula xisaabinta "deynta × heerka joogto ah" waxaa loo xaddiday, koowaad ee qadar bixinta weyn, bixinta sidoo kale waxa ay noqotay in ay tahay tan ugu weyn ee Tilmaamo in yaraan doonaa qadarka soo laabtay iyadoo la raacayo kordhay.
Marka tusaalooyin gaar ah
Tusaale ahaan heerka go'an oo heerka go'an maamulaha wareegi 5% maaliyadda macaamiisha, amaahatay 200,000 yen 12% dulsaar sannadle ah, formula xisaabinta noqonayaa sida soo socota aad.
yihiin waxa ka mid ah xaddi khuseeya maamulaha iyo xiiso, waa aasaasiga ah si kor loogu qaado isku midka ah in ay abaalmarin bil kasta. Haddii aad amaahatay in
shuruudaha kor ku xusan, habka xisaabinta danta inaad bixiso bil kasta noqon doonaa yar.
200,000 yen × (12% ÷ 12 bilood)
Sidaas daraaddeed, 8000 yen laga jaray 2000 yen oo xiiso lacagta bixinta waa, waxaa la jirayaa xisaabiyaa sida maamulaha a.
sida faa'iidooyinka gargaarka maamulaha iyo dulsaarka ah ee heerka go'an wareegi
iyo nidaamka wareegi xiiso go'an heerka, waxaa ka mid noqon doona marka la eego xaddiga lacagta in aad bixiso bishii ah oo go'an. nolosha
sidoo kale waxa uu yarayn karaa dhaawici si, ay awoodaan in ay qabtaan bixinta halka qorsheyneysa noqon doonaa. dakhliga
ayaa sidoo kale hab ammaan ah oo aan waa mid aad u xasiloon sida shaqo waqti-dhiman ah.
Intaa waxaa dheer, xataa marka aad ka dhigay amaahda cusub, sidoo kale faa'iido maxaa yeelay, Kanu waa warka culus ee aanu noqon mid aad u ballaaran.
qadar lacag ah inaad bixiso bil kasta, tan iyo in la go'aamiyo inta heerka iyo lacag bixinta ku xusan kasta, sidoo kale wax ka yar ay saamayn bixinta haddii ay jiraan ilaa xad waa dakhli joogto ah u noqon lahaa.
Intaa waxaa dheer, sababtoo ah waxaa jira wax badan oo ka mid ah shirkadaha waxaa lagu asal ahaan lagu isticmaalo lacagta qorsheeyey, waxa lagu gartaa u fududahay in ay sidoo kale fahamsanahay wareegga bixinta bil kasta. kasta
1 bil, iyo 35 maalmood oo kasta, waxay ku xiran tahay shirkadda, sababta oo ah waxa sidoo kale lagu midaysan kartaa in Maalinta mushaarka ee ku qeexan halkan ka, uma baahnid inaad wax laga walwalo, sida iloobin in aad bixiso.
khasaaraha maamulaha iyo xiisaha go'an heerka wareegi
sida darrada maamulaha iyo nidaamka wareegi xiiso go'an heerka, oo aan sameeyo qorshe bixinta adag, waxaa jira hal dhibic oo uu noqdo a amaahda muddada dheer. Waayo, codsanaya heerka joogto ah
asal ahaan amaahashada dheelitirka, ma noqon doonto 0 aad bixiso si wadajir ah ilaa xad haddii.
Intaa waxaa dheer, iyadoo la raacayo tirada lacagta ee sano uu kordho, waxaa sidoo kale ka mid noqon kara iyo khasaaraha oo xiiso leh korodhka u xuub.
iyo sababtoo ah waxaa jira Kanu waa warka culus ee bil kasta ka yar, halkii ay ka soo laabtay oo kaliya lacagta ugu yar ee lacagta la siiyo, waxaa muhiim ah in lacag dheeraad ah marka ay jirto farqi in lacagta.
sida by maaliyadda macaamiisha ee yar yar iyo kuwa meel dhexaadka ah
, shirkadaha aan soo qoray faahfaahinta qorshaha bixinta ayaa sidoo kale ma aha wax aan caadi ahayn. In the case of
ku noqon waxa aanu sheeg tirada maalmaha shirkadda, siday nooc ahaayeen marka kirada, waxaa kale oo la sii wadi doono in ay maalin kasta soo laabtay xiisaha kaliya noqon.
sidoo kale si loo baabi'iyo walaac noocan oo kale ah, sida in ay soo bandhigaan jadwal faahfaahsan bogga guriga gudahood ama qandaraas, waxa ay sheegtay in shirkadda si ay u doortaan Aamin ah waa muhiim.
maamulaha iyo xiisaha go'an heerka nidaamka wareegi waxaa loogu talagalay si loo ogaado sida bixinta kuwa ka badan boqolkiiba gaar ah oo daynta. Waqtiga bixinta
, waa la soo wada bixin doonaa danta maamulaha, waxa ay noqon doontaa qaab ah in lagu soo oogi doonaa lacagta wadarta bil kasta.
maamulaha iyo xiisaha go'an heerka nidaamka wareegi, ama xaddi lacag ah in aad bixiso bil walba go'an, waxaa jira faa'iidooyin sida ama rar yar marka amaahda cusub.
Dhanka kale in, amaahda iyo kiiska in uu noqdo muddo dheer, ka dhigay waqti badan si ay u bixiso oo keliya dulsaarka, sida waxaa sidoo kale waa khasaaro ah.
adag ku noqon maamulaha marka aad soo celin kartaa, this laga yaabaa inay tahay sharci jiifoo ah marka ay u isticmaalaan maamulaha iyo nidaamka wareegi xiiso go'an heerka.